Akụkọ ihe ịga nke ọma. LLP "Zhuravlevka-1", Republic of Kazakhstan - magazin "Usoro nduku"
Na mpaghara "ccessga nke Ọma", ụzọ ntanetị nke ụlọ ọrụ "Potato Sistem" na-ebipụta akụkọ banyere ụlọ ọrụ na-eto nduku na Russia, yana nso ma dị anya ná mba ofesi, nke ndị na-agụ akwụkwọ anyị zipụrụ.
E guzobere ugbo ahụ na 2005 n'obodo nta nke Zhuravlevka, mpaghara Bulandy, mpaghara Akmola. Isi profaịlụ: ọka na mmanụ na-eto.
N’afọ 2011, a na-etinye poteto n’usoro a kụrụ. Kemgbe oge ahụ, a na-ekenye ala hectare 100-120 maka ya kwa afọ. Ọrụ ahụ na-eji ihe ọkụkụ, owuwe ihe ubi na akụrụngwa nke ụlọ ọrụ GRIMME. A na-akụ nduku na ogbugba mmiri n'ubi: a na-arụnye igwe eji agba mmiri. Etinyewo ihe ubi ma jiri nwayọ nyefee ya n’ahịa ahịa nke obodo Nur-Sultan na Shymkent.
Alexander Matvienko, onye nhazi azụmahia nke Zhuravlevka-1 LLP kwuru na "Poteto na Kazakhstan bụ mkpụrụ a ma ama, nke na-eto nke ị nwere ike nweta ezigbo uru." - Ọnọdụ dị mkpa maka nke a bụ ụgwọ nrụpụta dị ala - n'ime 18-20 tenge / kg (3-3,5 rubles / kg). Anyị na-arụ ọrụ na ya ".
Kemgbe 2015, ụdị No. 1 maka ugbo ahụ bụ Gala nke na-amịpụta mkpụrụ ma na-enweghị nkọwa. Priselọ ọrụ ahụ zụrụ nnukwu mkpụrụ akụ sitere na ụlọ ọrụ NORIKA dị na Germany. N'afọ a, Zhuravlevka-1 LLP na-atụ anya ịnakọta ihe dị ka poteto 4500. A na-eme atụmatụ maka mmụba na mpaghara akuku na mmeghari nke ụdị dị iche iche maka oge ọzọ.
Tags: nduku na-etoGalaKazakhstan
Usoro ọgbara ọhụrụ nwere ike belata ọnụ ọgụ ọgụ hogweed ọtụtụ oge.
Nkwakọ ngwaahịa nduku: akpa akpa 100%